Dia faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavany sy ny fiadanany anie hoaminareo mandrakariva. Mbola misaotra ny Tompo ihany koa isika amin'ny fitantanany ny fiainantsika mandrakariva ka mbola nomeny tombon'androm-pahavelomana indray.
Eto isika dia hianatra ny atao hoe finoana. Manahoana ny finoana raha araka ny voalazan'ny Filazantsara, na ny tenin'ny Soratra Masina izany.
Ny finoana an’Andriamanitra dia mametraka ny fiainany manotolo eo am-pelatanany, fanankinana izany eo aminy; ary mahatoky azy amin'ny fo sy saina ary ny fanahiny rehetra.
Ny Kristianina mino an’Andriamanitra dia mino ny teniny, izay voalazan’ny Baiboly. Mino an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanany, izay mananana ny fandavantena toy ny an’i Kristy. Vonona hanompo an’Andriamanitra sy manolotra ny fiainany ho azy. Ka mino fa Izy no afaka hamonjy sy hanafaka azy ao anatin’ny fahotana, ka manolotra Azy ny fontsika sy ny saintsika ary ny Fanahintsika manontolo.
Ny finoana an’i Jesosy no tena fototra ijoroan’ny finoana Kristianina araka ny voalaza ao amin’ny Romana 10:17 “Koa ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy.” Ary koa araka ny voalaza ao amin’ny Hebreo 11:1 “Ary ny finoana no fahatokiana ny amin’ny zavatra rehetra, fanehoana ny zavatra tsy hita.”
Hoy Jaona milaza mikasika ny nahatanterahan’ny tenin’Andriamanitra mikasika an’i Jesosy, izay hita ao amin’ny Jaona 1:14 “Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana.”
Ny finona dia manana anjara toerana lehibe indrindra eo amin’ny fiainan’ny olona iray, ka amin’ny alalan’izany no entin’Andriamanitra amonjena antsika tsirairay avy. Araka ny hita ao amin’ny Efesianina 2:8 “Fa ny fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra.”
Ambarako amintsika eto fa isika rehetra izao dia mpanota avokoa teo aloha, fa noho ny fitiavan’Andriamanitra araka ny voalazan’ny Baiboly, dia nomeny ny zanany Lahitokana isika, tsy iza izany fa Jesosy Kristy izay nahafoy ny aiany hanavotana antsika teo ambony Hazo Fijaliana. Nandatsaka ny ràny soa mba hihavanantsika indray amin’Andriamanitra, ka tsy hampisy ny elanelana eo amintsika sy ilay Tompo. Nomeny maimaimpoana izany tsy misy takalony, fa ny finoantsika Azy izay no ilain’Andriamanitra amintsika, fa Izy Tompo no efa nilaza fa “Inty ny zanako malalako izay sitrako; Izy no henoy” araka izay hita ao amin’ny 1petera 1:17 “Ary Ilay tsy mizaha tavan’olona, fa mitsara araka ny asan’izy rehetra, no antsoinareo hoe Ray, dia mitondrà tena amin’ny fahatahorana mandritra ny andron’ny fivahiniananareo ety” sy ao amin’ny Matio 17:5 ”Raha mbola niteny izy, indro, nisy rahona mazava nanarona azy ireo; ary, injao, nisy feo avy tao amin’ny rahona ananao hoe: Inty no zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy.”
Entina hanazavana misimisy kokoa ny fanazavana mikasika ny finoana dia hitondra fanazavana maromaro araka ny voalazan’ny Soratra Masina.
Araka ny voalazan’i Matio 15:21-28 “Dia niala teo Jesosy nankany amin’ny fari-tanin’i Tyro sy Sidona. Ary, indro, nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin’izany tany izany ka niantso nanao hoe: Mamindra fo amiko, Tompoko, Zanak’i Davoda ô! Ny zaanako-vavy ampahorian’ny demonia loatra. Fa Izy tsy namaly teny azy. Dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: Roahy Izy, fa miantso mafy ato aoriantsika. Ary Izy namaly ka nanao hoe: Tsy nirahina Aho afa-tsy ho amin’ny ondry very amin’ny taranak’Israely. Fa nanatona ihany Ravehivavy, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko ô, vonjeo aho. Fa Izy namaly ka nanao hoe: Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy hoan’ny amboa kely. Fa hoy ravehivavy: Marina izany, Tompoko; fa na dia ny amboa kely aza mihinana izay sombintsombiny latsaka avy amin’ny latabaty ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin’izay ora izay.” Sy araka ny Marka 7:24-30 “Ary niala teo Jesosy ka lasa nankany amin’ny sisintanin’i Tyro sy Sidona; dia niditra tao an-trano Izy, ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany; kanefa tsy nahazo niery Izy. Fa niaraka tamin’izay dia nisy vehivavy anankiray nanndre ny aminy (ny zanani-vavy tanora dia azom-panahy maloto), dia nankao ka niankohoka tamin’ny taongony. Ary jentilisa vehivavy, avy amin’ny firenena Syro-foinika; dia nangataka taminy Izy mba hamoaka ny demonia amin’ny zanani-vavy. Fa hoy Jesosy taminy: Aoka ho voky aloha ny zaza; fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy hoan’ny amboakely. Fa ravehivavy namaly ka nanao taminy hoe: Eny, Tompoko, kanefa na dia ny amboakely ao ambanin’ny latabatra aza dia mihinana ny sombintsombin’ny mofon-jaza ihany. Dia hoy Jesosy taminy: Noho izany teny izany mandehana hianao; efa nivoaka tamin’ny zanakao vavy ny demonia. Ary raha tonga tao an-tranony ravehivavy, dia hitany nandry teo ambonin’ny farafara ny zanani-vavy, ary ny demonia efa nivoaka taminy.”
Hitantsika araka izany voalazan’ny finoana soratra masina izany, fa tena nanam-pinoana tokoa ity renim-pianakaviana ity izany. Lehibe ny finoany, ary mino izy fa Jesosy tokoa ilay mpamonjy sy mpanafaka eo amin’ny fiainany. Mino tokoa ary va ianao fa Jesosy izay inoanao dia mbola mahavita izany mandrak’ankehitriny? Eny hoy aho aminao, Jesosy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Izay efa nataony hatrizay dia mbola hataony ihany koa aminao, fa ny zavatra takian’Andriamanitra amintsika dia ny finoana Azy; maneke Azy amin’ny fonao rehetra, amin’ny sainao rehetra, amin’ny fanahinao rehetra.
Hitantsika ihany koa ilay kapiteny Romana iray, ilay “officier” na lehiben’ny tafika; izay manana ny akizilahiny narary efa ho faty ka nanatona an’i Jesosy. Araka izay hita ao amin’i Lioka 7:1-10 “Ary rehefa vitan’i Jesosy teo anatrehan’ny olona izany tori-teniny rehetra izany, dia nankany Kepernaomy Izy. Ary ny mpanompon’ny kapiteny anankiray, izay malalany, dia narary efa ho faty. Koa raha nehare ny amin’i Jesosy ilay kapiteny, dia naniraka loholon’ny Jiosy hankeo aminy hangataka Azy mba ho avy ka hahasitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin’i Jesosy ireo, dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe: Miendrika ny hanaovanao izany izy. Satria tia ny firenenntsika izy, sady izy no efa nanao ny synagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa efa mby teo akaikin’ny trano Izy, Ilay kapiteny dia nairaka zakaiza hitsena Azy ka nanao taminy hoe: Tompoko, aza manahirana ny tenanao Hianao; fa tsy mendrika ny hidiranao ao ambanin’ny tafon-tranoko aho. Koa na dia ny tenako aza dia tsy nataoko fa tsy mendrika hankao aminao; fa mitenena ihany, dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany, ka manana miaramila izay feheziko; ka hoy izaho amin’ny anankiray: Mandehana, dia mandeka izy, ary amin’ny anankiray koa: Avia, dia avy izy, ary amin’ny mpanompoko: Ataovy izao, dia manao izy. Ary nony nahare izany Jesosy, dia gaga taminy; ary dia nitodika Izy ka nanao tamin’ny vahoaka izay nanaraka Azy hoe: Lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toa izany Aho, na dia tamin’Israely aza. Ary nony tafaverina tao an-trano ireo iraka ireo, dia hitany fa sitrana ilay mpanompo.” Sy araka ny Matio 8:5-11 “Ary nony tonga tao Kapernaomy Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe: Tompoko ô, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, mararin’ny paralisisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy: Ho avy Aho hahasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy mendrika ny hidiranao ao ambanin’ny tafon-tranoko aho; fa mitenena ihany, dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho kosa lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko; ary raha hoy izaho amin’ny anankiray: Mandehana, dia mandeha izy; ary amin’ny anankiray koa: Avia, dia avy izy; ary amin’ny andevoko: Ataovy izao, dia manao izy. Ary nony nahare izany Jesosy, dia gaga ka niteny tamin’izay nanaraka azy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany Aho na dia tamin’ny Israely aza.”
Voalaza eto fa manana finoana lehibe tokoa ity kapiteny ity, satria mahatsapa fa na dia ny teny izay lazain’i Jesosy fotsiny aza dia afaka manasitrana. Aiza ho aiza amin’izany àry ny finoana izay anananao? Hatraiza ny fahatsapanao ny herin’i Jesosy Kristy eo amin’ny fiainanao? Inona no efa nataony teo amin’ny fiainanao ka nahatsapanao izany? Fa ny an’ity kapiteny ity dia mahatsapa izy fa Jesosy dia manafaka, noho ny finoana izay nanany, nahay nanetry tena teo anatrehan’Andriamanitra; na dia teo aza ny fahefana izay nananany amin’ny amin’ny maha kapiteny sy mpitari-tafika azy. Dia nafoiny izany, navelany izany satria amin’ny maha olombelona ihany izany, fa eo anatrehan’Andriamanitra dia iray ihany ny olona rehetra. Tsy misy fahasamihafana isika rehetra izao raha manoloana ny tenin’Andriamanitra; fa ny fatran’ny finoana kosa no maha samihafa izany, ka hamaliany ny vavaka izay ataontsika.
Iza avy ireo manam-pinoana raha araka ny voalazan’ny Baiboly, araka ny Hebreo 11 “Ary ny finoana no fahatokiana amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara laza ny ntaolo. Finoana no ahafantsarantsika fa ny tanin’Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra izao. Finoana no nanateran’i Abela ho an’Andriamanitra fanatitra tsara noho ny an’i Kaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no nanambara ny amin’ny fanatitra nataony; ary amin’izany, na dia maty aza izy, dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana an’i Enoka tsy hiharan’ny fahafatesana; ka dia tsy hita izy, satria nafindran’Andriamanitra; fa talohan’ny namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan’Andramanitra izy. Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy. Finoana no nanambaran’i Noa Sambo-fiara hamonjena ny ankohonany, fa natahotra izy, rehefa notoroan’Andriamanitra hevitra ny amin’ny zavatra tsy mbola hita; koa izany no nanamelihany izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no naneken’i Abrahama, rehefa nantsoina, hiainga any amin’izay tany ho azony ho lova; ka dia niainga izy, nefa tsy fantany izay halehany. Finoana no nivahiniany tany amin’ny tany nolazain’ny teny fikasana, toy ny any an-tanin’olona, mitoetra an-day mbamin’Isaka sy Jakoba, mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy; fa nanantena hahazo ny tanàna misy fanorenana azy, Andriamanitra no Tompo-marika sy Mpanao izany. Ary Saraha aza, dia finoana koa no nandraisany hery hanan’anaka rehefa nitsaha-jaza izy, satria nataony fa mahatoky Ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy tamin’ny anankiray, izay efa toy ny maty, no nihavian’ny maro toy ny kintana eny amin’ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina, izay tsy hita isa. Ireo rehetra ireo dia maty tamin’ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana; fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo niarahaba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tety ambonin’ny tany izy. Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy. Ary raha tàhiny nahatsiaro ny tany nialany izy, dia ho nahita andro hiverenany. Fa amin’iznay ny tsara lavitra no iriny, dia ny any an-danitra; ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra hatao hoe Andriamanitra satria efa nanamboatra tanàna hoan’ireo Izy. Finoana no nanatrehan’i Abrahama an’Isaka, raha nizahan-toetra izy; eny, ny zanani-lahy tokana no naterin’ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Dia ilay nilazana hoe: “Avy amin’Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao” (Genesisy 21:12). Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza; ary hoatra ny avy tamin’izany no nandraizany azy. Finoana no nitsofan’Isaka rano an’i Jakoba sy Esao ny amin’ny zavatra ho avy. Finoana no nitsofan’i Jakoba rano an’i Josefa roa lahy, rehefa ho faty izy, ka nivavaka izy, niankina tamin’ny lohan’ny tehiny. Finoana no nilazan’i Josefa ny fialan’ny zanak’Israely, rehefa ho faty izy, sy nanafarany ny amin’ny taolany. Finoana no nanafenan’ny ray aman-drenin’i Mosesy azy telo volana, raha vao teraka iey, satria hitany fa zaza tsara izy, ary tsy natahorany ny didim-panjakana. Finoana no nandavan’i Mosesy tsy hatao hoe zanaky ny zanakavavin’i Farao, rehefa lehibe izy. Nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin’ny olon’Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin’ny fahotana, nanao ny fanaratsiana an’i Kristy ho harena be lavitra noho ny zava-tsoan’i Egipta, satria nijery ny famaliantsoa izy. Finoana no nandaozany an’i Egipta, ka tsy natahoran’ny mpanjaka; fa naharitra toy ny nahita Izay tsy hita izy. Finoana no nitandremany ny Paska sy ny famafazana ny rà, fandrao hahatratra ny azy ilay nandringana ny lahimatoa. Finoana no nitana ny Ranomasina Mena toy ny mandia tany maina, izay mba nandraman’ny Egiptiana, ka dia voatelina izy. Finoana no nampirodana ny mandan’i Jeriko, rehefa nihodidina hafitoana. Finoana no tsy nahafaty an-dRahaba janga niaraka tamin’ny tsy mino, satria nandray ny mpisafo tany tamin’ny fihavanana izy. Ary inona koa no holazaiko? Fa ho lany ny andro, raha milaza an’i Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefia aho, Davida koa sy Samoela ary ny mpaminany, izay nandresy fanjakana tamin’ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan’ny liona, namono ny fidedadedan’afo, afaka tamin’ny lelan-tsabatra, raha nalemy dia nampahatanjahina, tonga nahery tamin’ny ady, dia nampandositra ny miaramilan’ny firenena hafa. Ny vehivavy nandray azy efa maty, fa natsagana ho velona indray; ary ny sasany nampijaliana ho faty, nefa tsy nety nanao izay hahafahany, mba hahazoany fitsaganganana tsara lavitra; ary ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy ary fatorana sy tranomaizina koa; notoraham-bato izy, notsofana, nalaim-panahy, novonoina tamin’ny sabatra, dia nirenireny nitafy hoditr’ondry sy hoditr’osy; efa lao, ory, fadiranovana (nefa izao tontolo izao tsy mendrika ho nitoerany akory); dia nirenireny tany an’efitra sy tany an-tendrombohitra sy tany an-johy ary tao an-davan-tany izy. Ary ireo rehetra ireo, na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray ny teny fikasana; fa Andriamanitra efa nanamboatra izay tsara lavitra hoantsika, mba tsy hatao tanteraka ireo, raha tsy efa mby eo koa isika.”
Maro ireo olona voalazan'ny Soratra Masina nanana ny finoany an'Andriamanitra, ary isan'izany ireo mpaminany izay niara-niasa tamin'Andriamanitra mivantana mihitsy, satria Izy ireo dia nomen'Andriamnitra tolo-tsaina sy fahendrena. Ka nilan'ny olona famonjena teo amin'ny fiarahamonina nisy azy. Misy koa aza mpanjaka mila hevitra amin'Izy ireo. Toa an'i Josefa ilay lehilahy mpiandry ondry taloha, nefa dia lasa mpanolo-tsaina sy mpanapaka tao amina fanjakana izay. Izay tsy zoviana amintsika intsony ny tantara. Rehefa tena mifandray amin'Andriamanitra tanteraka ihany koa isika ry havana dia omen'Abndriamanitra tolo-tsaina toa azy ireo koa. Ka mila miorina tsara isika noho izany, fa Andriamanitra sia eo akaikintsika mandrakariva. Fa ny fahotantsika no mahatonga antsika ho lavitra Azy. Ary io no efitra mampisaraka antsika aminy.
Koa aoka isika ho iray ao amin'ny Tompo, hampitonbo ny finoantsika, fa Andriamanitra velona no Tompointsika, mahay ny zavatra rehetra, nahary izao rehetra izao, ary mbola tia ahy sy ianao. Aoreno mafy àry ny finoana izay ananao; mamakia ny Baiboly isanandro, mihainoa ny toriteny; mamonje fampianarana, mba hoentinao manorina tsara ny finona izay anananao; fa ao anatin'ireny rehetra ireny no mampitombo hery anao mandrakariva. Mahereza mivavaka, miresaha mandrakariva amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy mba hananao fahendrena, hanomezany tolo-tsaina anao mandrakariva, ka ho tena iray amin'Izy Tompo tokoa ianao.
Ny Tompo anie homba anao, ary mahereza amin'ny fanompoana ny Tompo.